स्क्रब टाइफसबाट एक जनाको मृत्यु, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
स्क्रब टाइफसबाट एक जनाको मृत्यु
उक्त रोग सरुवा भएकाले अरुमा सङ्क्रमण हुन नदिन स्वास्थ्यचौकीबाट टोली खटाइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका भेटनरी कन्ट्रोल अधिकृत दीपेन्द्र रावलले बताए। स्क्रब टाइफस लागेमा उच्च ज्वरो आउने, मांसपेसी दुख्ने, जीउमा रातो दाग देखा पर्ने र टाउको धेरै दुख्ने लक्षण हुने चिकित्सकले बताएका छन् ।
अजयमेरु–२ का एक वृद्धले वृद्धभत्ताको रकमबाट विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका लागि अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् । सिमगाउँका ८५ वर्षीय डम्बर पनेरुले २५ महीनामा पाएको वृद्धभत्ताको ५० हजार अजयमेरु आधारभूत विद्यालय रोल्लीमा अक्षयकोष स्थापना गरेको छ । विद्यालयमा अध्ययनरत टुहुरा, असहाय, गरीब, दलित र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सो अक्षयकोेषबाट छात्रवृत्ति वितरण गरिने विद्यालयले जनाएको छ ।